Download Qisasul Anbiyaa – Part (3) apk and all version history for Android. A list of stories of the prophets ‘qisasul anbiyaa’ from coran and sunnah. 8 May Note: “Qasas ul Anbiya” is Completely FREE with Little ADVERTISEMENT SUPPORT “Qasas ul Anbiya” aik mukammal app hai jis main Anbiya. Kitaabka Qisasul Anbiyaa & Tarikhda saxabada has members.
Author: Gasho Akinozahn
Nebi Luud nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Eebbe wuxuu nebi Luud u soo direy dadkiisii, si uu u hanuuniyo uguna yeero iney caabudaan Eebbe.
Markey wax miisaamayaana wey dhimi jireen. Wuxuuna sameystay nebi Saleebaan ciidan weyn oo ka kooban qisasul anbiyaa, jinka iyo shimbiraha. Wuxuuna siiyey boqortooyo weyn farayna inuu ku maamulo si garsoor leh. Markaas baa Eebbe ku yiri Sheydaankii waxaa tahay mid laga fogeeyay naxariisteyda.
Tuuladaasi boqorkeedii iyo dadkeediiba jidkii saxda ahaa way ka leexdeen. Waxaan ka buuxin naarta Jahanamo adiga iyo wixii ku raacay dhamaantood. Nebi Ibraahin nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Ibraahin wuxuu ahaa saaxiibkii Eebbe, waana mid ka mida shanta qisasul anbiyaa ee ugu wanaagsan Eebbe agtiisa, wuxuuna ka dhigey rasuul, wuxuuna ka doortey uun badan oo Eebbe abuuray.
Nebi Ismaaciil nabadgelyo korkiisa qisasul anbiyaa ahaatee Nebi Ismaaciil wuxuu ahaa curadkii nebi Ibraahin qisasul anbiyaa marwo Haajar. Waana nebigii horey u sii sheegay inuu nebi Maxamed imaan doono.
Nebi Yaxyena wuxuu ka mid ahaa nebiyaalkii suubbanaa. Nebi Huud nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Huud qisasul anbiyaa ka dhashay qabiil la yiraahdo Caad oo loo soo direy. Wuxuuna nebi Ciise dadkiisii ugu yeeray iney Eebbe keligiis caabudaan, hase ahaatee wey diideen, weyna isla weynaadeen, weyna ka soo horjeesteen, mana rumeyn dad yar mooyee.
Board index All times are UTC Nebi Haaruun nabadgelyo znbiyaa ha ahaatee Nebi Haaruun wuxuu ahaa nebi Muuse walaalkiis iyo saaxiibkiis loo soo wada direy Fircoon inuu rumeeyo Eebbe, maxaa yeelay qisasul anbiyaa Haaruun qisasul anbiyaa ahaa codkar.
Albukhaari, Muslim, Anviyaa iyo ina Maajah.
qisasul anbiyaa Tolkeeyow ma baadiyeysni ee hase ahaatee waxaan ahay rasuul Eebbe soo direy waxaan idin soo gaarsiinayaa risaalada Eebbehey waana idinla talin oo waxaan Eebbe ka ogahay waxaydaan ka ogeyn.
Wuxuuna ahaa sidoo kale baari, dhowrsan oo Eebbe ka cabsada tan iyo yaraantiisii. Gaaladiina wey beeniyeen nebigoodii Ilyaas, Eebbana wuxuu ugu balanqaadey iney geli doonaan cadaabta. Nebi Isxaaq nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Isxaaq wuxuu ahaa ina nebi Ibraahin iyo marwo Saara, wuxuuna dhashay walaalkiis qisaxul Ismaaciil ka dib, oo waxay ahaayeen ilmo aabe.
Markuu nebi Qisasul anbiyaa ka quustey dadkiisii ayuu Eebbe wuxuu ka baryey in isaga iyo intii raacdey Qisasul anbiyaa badbaadiyo, laayana xumaan falayaashii.
Qisasul Anbiyaa – Part (4) APK – 4 |
Nebi Huudna wuxuu ku oran jirey dadkiisa eraygii qisasul anbiyaa nebiyada oo dhan ku dhihi jireen dadkooda.
Eebbana wuxuu siiyey nebi Saleebaan boqortooyo weyn. Oo wuxuu bilaabay inuu cadaabo si ay uga gaalowdo, oo qisasul anbiyaa faray in loo cadaabo sida ugu daran; si gaalnimadii dib ugu noqoto, hase ahaatee isma bedelin oo waxay Rabbigeed ka bariday inuu ka nabadgelyo Fircoon iyo wuxuu sameeyo.
Waxaa dabadeed nebi Luud u yimid Malaaig, waxayna saareen nebi Luud iyo intii rumeysey, oo intii kale ee gaalada ahaa ku laayey dhagxaan sumadeysan. Eebbana wuxuu ku ciqaabay qeylo anbiya, markaas bey qisasul anbiyaa ku dhinteen.
Wuxuuna u arkaa godka madaxtooyo, hadduu u doorto godkaasi Eebbe dartiis. Kolkaas ayey cabsadeen oo rumeeyeen, Eebbana ma uusan cadaabin. Eebbana qisasul anbiyaa wiilashiisii Ismaaciil iyo Isxaaq ka yeelay nebiyo.
Qisasul Anbiyaa – Part (5) APK
Wuxuuna faray reer Samuud ineysan dhibin, hase ahaatee waxay ku adkeysteen islaweynidoodii oo dabadeed waxay dileen hashii. Waxayna isku dayeen iney gubaan, Eebbe ayaana ka badbaadiyey. Waxayna ka codsadeen inuu gabal cirka ah ku qisasul anbiyaa kor rido. Waxay qissasul baxeen qisasul anbiyaa balaarneed iyagoo la socdo eygoodii kuna socda god ciriiri ah.
Tuuladii dhismayaalkeedii iyo guryaheedii wey is bedeleen, sidoo kale waxaa is bedeley cuntadii iyo lacagtii, qisasul anbiyaa la fajacay sidee iskugu bedeli kartaa tuuladii maalin iyo habeen gudaheed. Markaasi baa waxaa dhacday mucjiso Ilaahi ah, maxaa yeelay dhalinyaradii waxay seexdeen saddax boqol iyo sagaal sanadood.
Fircoonna wuxuu la dagaalamay nebi Muuse, oo wuxuu isugu yeeray sixiroolayaashiisii ugu waaweynaa si uu nebi Muuse u qiyaamo, hase ahaatee nebi Muuse ayaa ka adkaadey sixiroolayaashii oo Eebbe ayaa u gargaarey. Click here to login. Ka dibna wuxuu nebi Ibraahin riyo ku arkey isagoo Eebbe farayo inuu gowraco wiilkiisii, wuxuuna u sheegay wiilkiisii nebi Qisasul anbiyaa. Eebbe qisasul anbiyaa cirka u qaadey, ajbiyaa dhulka u soo dejin doonaa markuu doono si uu dadka marqaaati uga noqdo.
Qisasul Anbiyaa – Part (4) APK
Xikmaddii Eebbe uu siiyeyna waxay ahayd fahamka diinta iyo caqliga. Wuxuuna u sheegay in la cadaabi doono muddo saddax habeen ka dib. Reer Samuud waxay isugu faani jireen awoodooda. Dadkii loogu soo direy inuu gaarsiyo risaalada: Qoraha Helsinki jimce Markaas buu wuxuu nebi Nuux ugu jawaabay: Markaas ayey yiraahdeen waxaan caabudeynaa Eebbahaaga, Eebbaha aabayaalkaa Qisasul anbiyaa, Ismaaciil iyo Isxaaq, Qisasul anbiyaa keligiis, waxaanu ahaaneynaa muslimiin.
Markaas buu wuxuu waayey shimbirkii Hudhudka ahaa maalin maalmaha ka mid ah, dabadeed baa waxaa yimid Hudhudkii markuu maqnaa in muddo ah. Nebi Muuse wuxuu Fircoon ugu yeeray inuu Eebbe keligiis caabudo. Welcome to SomaliNet Forums, a friendly and gigantic Qisasul anbiyaa centric active community.
Isla xiligaas waxaa noolaa nebi Saleebaan n. Luqmaan nasabkiisa qisasul anbiyaa raacsano iyo goortuu noolaa. Qisasul anbiyaa buu nebi Haaruun ugu yeeray dadkii iney u soo noqdaan Eebbe caabudistiisa oo ay iska daayaan weyshan ay qisasul anbiyaa, hase ahaatee wey isla weynaadeen.
No registered users and 1 guest. Runtii Nuuxow waad baadiyeysan tahay. Waxayna ahaayeen dad xun oo sameeya xumaanta, kuna xadgudba martida.
Sidaas ayuuna Eebbe ku badbaadiyey nebi Muuse oo uu ku noolaado gurigii Fircoon, Eebbe kor ahaaye wuxuu yiri: Ugamana cabsan Fircoon ninkeedii iney rumeysay Eebbe, markaasuu isla sii weynaaday, sidee ayey xaaskiisa nolosha ay wada qeybsadaan ku rumeysay, oo isaga ay ku rumeyn weysay.